यौनकथा Archives | साहित्यपोस्ट
८ भाद्र २०७८ १८:०१ 0
'सिरुपाते जोवनजस्तो मायाँ नमार' रेडियोबाट लगातार घन्किएको यो आवाज मन पर्न थालेको छ । उसै त मायाँप्रीतिका कुरा गर्न घरमा त्यति सहज वातावरण भने हुँदैन । धार्मिक गानामा मस्त हजुरबुबाका अगाडि मायाँप्रीतिका कुरा गर्दा त घर नै उचाल्ने गरी…
१९ श्रावण २०७८ १८:०१ 0
दिनानाथ साहूको पछिसम्म पनि बच्चा भएनन् । देवी भाके, देउरालीमा पाठी चढाए, जान्नेलाई हेराए । हरिवंश यज्ञ लगाए तर पनि बच्चा भएनन् ।चिना हेर्नेले तिम्रो त तीन बिहा लेखेको छ भन्यो । तेस्रोबाट मात्रै बच्चा हुन्छ भन्यो, त्यसैले ढिलाइ नगरी…
म भर्खर खर्बारीमा पुगेर एक सप्को घाँस काट्न मात्र भ्याएकी थिएँ, फोनको रिङटोन बज्यो । हतपत हँसिया भुईँमा फ्याकेर फोन भएनजिक पुगेँ र मोबाइलको स्क्रिनमा हेरेँ । उनको मुस्कुराएको फोटो देखेँ । हतपत फोन हातमा लिएँ ।जहिलेसुकै रातिको खाना…
११ जेष्ठ २०७८ १९:५४ 0
– ए हिँड हिँड... स्टार्ट, स्टार्ट... – अबेर भो, लौ बा क्लास छुट्ने भो... ल ड्राइभर सा’ब चाँडै... – पाइलट भन न पाइलट... अनि पो कुद्छ त... – हेर के सिद्रा कोचेजस्तो कोच्या... मरिने भो बा !... – नयाँ सन्देश !... नयाँ सन्देश…
४ जेष्ठ २०७८ १८:०१ 0
अग्लो माथि उठेको बिल्डिङको छतमा स-साना कपडाहरू प्लास्टिकको च्याप्नेले दह्रो चेपेर झुन्डाइएका छन् । मानौँ ती कपडाहरू खित्खिताएर यति छिल्लिँदै हल्लिरहेका छन्, त्यस च्याप्नेले अझ साह्रो कसेर समातिराखेको छ । कुन्नि कस्तो मातको तातो तातो…